Warshadda Filimka Shiinaha ee Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaal. Boya
Boya waa soosaarid la aasaasay 2018, waxaan u heellanay cilmi baaris cusub, filim maqaarka waa mid ka mid ah badeecadeena cusub oo leh jawaab celin la yaab leh suuqa .Waxaan bixin karnaa filimo badan oo maqaar ah oo leh hufnaan sare iyo dhalaal, iska caabin sare , xitaa badeecad qallafsan oo adag leh ayaa la soo duubi karaa oo si ammaan ah loo rari karaa.
Sidee ayuu filimka maqaarku u shaqeeyaa?
Filimka maqaarka waxaa loo isticmaalaa mashiinka maqaarka iyo mashiinka sameysma kuleylka. Waa filim caag ah oo cad oo leh daahfurnaan sare oo ka badan alaabooyinka oo si adag ugu dhegan alaabada ka dib faakuumka. Sidan oo kale, alaabadaada ayaa si cad loogu soo bandhigi karaa macaamiishaada. Sababtoo ah dhumucda filimka maqaarku wuxuu u dhexeeyaa 80um-200um sidoo kale wuxuu ilaalin karaa badeecadaada inta lagu jiro safarka.
Iyada oo leh filim maqaarka Boya ah si aad uhesho alaabtaada, waxaad yeelan doontaa muuqaal sare oo ah badeecada aad xirxirtay oo waxa ka muhiimsan ayaa ah inay siiso macmiilkaaga dareenka dabiiciga ah, waxaa jira alaabooyin badan oo aad ku soo qaadan karto filim maqaarka laakiin gaar ahaan ugu fiican kuwa hoose. :
●Waxyaabaha farmaajo iyo xusuus qor
●Alaabta barafaysan, cuntada karsan ama cunooyinka fudud
●Hilibka, kalluunka iyo digaagga
●Waxyaabaha: PE, PE / EVOH / PE
●Lagu shaabadeeyo PE, Mono APET, Mono PP, ama warqad / kartoon
●Microwave ama Sou vide
●Qiyaasta: 80 illaa 200 μm
●Daloolin sare iyo iska caabbinta ilmada
●Waxqabadka qufulka saxda ah
●Qalabaynta ugu fiican
●Ilaalin lagu kalsoonaan karo inta lagu guda jiro gaadiidka, kaydinta aaminka ah
1.Mudo intee le'eg ayaa nolosha shelf lagu kordhinayaa Vacuum-ka hoostiisa?
Waxay ku dheereyn kartaa nolosha shelf ee shey kasta oo hallaabi kara 3 ilaa 5 jeer marka loo eego nolosha qaboojiyaha caadiga ah.
2.Miyaad naga caawin kartaa tijaabinta maaddada iyo qaabdhismeedka annaga?
Haa. Haddii aadan ka caddeyn filimkaaga, waxaan ku siin karnaa adeeggayaga baaritaanka bilaashka ah.
3.Ma haysaa mashiinno aad ku falanqeyso shay-baarka filimada?
Waxaan leenahay mashiinno aan ku tijaabino shaybaarada filimada.
Waxaanan kuu soo diri karnaa warbixinta baaritaanka ka dib tijaabada filimada.
Hore: Fidinta Filimka
Xiga: Bacda Tuubo
Bacda Tube Evoh
Filim caag ah
Filinka Bag Vacuum
Vffs Filin Buuxin Kulul
Iska Yaree Bacda iyo Filimka
Filimka cusion air